Tag: naqshad | Martech Zone
Faafida ayaa si weyn u carqaladeysay isbeddellada suuqgeynta macaamiisha iyadoo ganacsiyadu la qabsadeen tallaabooyinka dowladda ee la qaaday si ay isugu dayaan inay ka hortagaan faafitaanka degdegga ah ee COVID-19. Markii shirarkii la xiray, iibsadayaasha B2B waxay u guureen onleenka si ay u helaan nuxur iyo ilo farsamo si ay uga caawiyaan marxaladaha safarka iibsadaha B2B. Kooxda ku jirta Suuq -geynta Dijital ah ee Filibiin waxay isu keeneen xog -ururintan, Isbeddellada Suuq -geynta B2B ee sannadka 2021 kaas oo guriga u horseedaya 7 isbeddel oo udub dhexaad u ah sida ay u kooban tahay B2B
Waxaan la shaqeyneynaa shirkad qaran hadda si aan u horumarino qaab-dhismeedka emaylka Suuqgeynta Suuqgeynta macaamiisha waax walba iyo qeybaha ganacsiga. Sababtoo ah daneeyayaasha, qandaraasleyda, iyo nashqadeeyayaasha ayaa dhammaantood fog, naqshadeeyaha wuxuu horumariyey jeesjeeskiisa wuxuuna ka shaqeeyey noocyo kooxda hoggaamintiisa ah - ka dibna wuxuu ku wareejiyey kooxdeena si ay uga jawaabaan koodh iyo fulin. Naqshadeeyaha ayaa i baray Abstract. Abstract waa aalad wadashaqeyn toos ah oo loogu talagalay Mac halkaasoo shirkaddaada, qandaraasleyda,
Arbaco, Juun 31, 2019 Talaado, July 30, 2019 Douglas Karr
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, waxaan gacan ka geysanayay sidii loo horumarin lahaa loona dhexgelin lahaa tusaale ahaan WordPress qaabeyn heer sare ah oo loogu talagalay macmiil. Waa isku dheelitirnaanta qaabeynta, fidinta WordPress iyada oo loo marayo goobaha caadiga ah, noocyada boostada caadiga ah, qaabeynta naqshadeynta, mawduuca cunugga, iyo qalabyada gaarka ah. Qaybta adag ayaa ah inaan ka sameynayo jees jees fudud oo laga soo qaaday meherad meheraddeed oo lahaansho. In kasta oo ay tahay barxad adag oo muuqaalka iyo naqshadeynta ah, haddana si fudud ugama tarjunto HTML5 iyo CSS3.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaan ka shaqeynayay manhajyo aqoon isweydaarsiyo suuq geyn ah iyo shahaadooyin shirkad caalami ah iyo jaamacad, siday u kala horreeyaan. Waxay ahayd safar aan caadi aheyn - si qoto dheer u falanqeynaya sida ganacsadeyaasheena loogu diyaarinayo barnaamijyadooda shahaadada rasmiga ah, iyo ogaanshaha nusqaamaha ka dhigaya xirfadahooda inay ka sii suuq badan yihiin goobta shaqada. Furaha barnaamijyada shahaadada dhaqameed waa in manhajku inta badan qaato dhowr sano in la oggolaado. Nasiib darrose, taasi waxay gelineysaa ardayda qalin jabisay